Guddoomiye Muudey oo si weeyn loogu soo dhaweeyay Muqdisho | STN Somali
Home Wararka Guddoomiye Muudey oo si weeyn loogu soo dhaweeyay Muqdisho
Guddoomiye Muudey oo si weeyn loogu soo dhaweeyay Muqdisho
Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya C/weli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Muqdisho, kaddib markii uu safar kaga yimid dalka Turkiga oo todobaadyadii la soo dhaafay ku maqnaa.
Guddoomiye C/weli Muudey ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay Xildhibaano iyo Wasiiro ka tirsan Xukuumadda, iyadoo soo dhoweyntiisa u muuqatay dhoolatus siyaasadeed.
Hadal kooban oo uu warbaahinta ku siiyay qeybta VIP ee garoonka diyaaradaha ayuu ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo laabashadiisa iyo soo dhoweynta diiran, waxaana uu xusay in dhowaan uu dib u furmi doono Kalfadhiga Baarlamaanka, lana ambaqaadi doono howlaha hor-yaala.
Imaanshihiisa Muqdisho ayaa ku soo aaday, iyadoo maalmihii la soo dhaafay la hadal hayay warar sheegayay inuu socdo olole ka dhan ah oo la doonayo in mooshin looga keeno Guddoomiye kuxigeenka 1aad oo xilligan awood badan ku leh Baarlamaanka.
C/weli Muudey ayaa la sheegay inuu aad uga soo horjeedo Sharciga doorashooyinka, waxaana dhowr jeer kulamo isaga iyo Madaxweynaha dhex maray ay isku qabteen qodobo ka mid ah sharciga doorashada.
Xildhibaano ku dhow Madaxweynaha ayaa la sheegayaa inay maalmihii u dambeeyay wadeen olole isaga ka dhan ah oo Mooshin looga keenayo, inkastoo warkaas uu yahay mid weli suuqa ku jira oo aan dhab noqon, hase ahaatee uu jiro guux hoose oo ay wadaan Xildhibaanada.
Previous articleFaah faahin qarax gaari loo adeegsaday oo ka dhacay Koontaroolka Ciidanka ee ku dhaw Daljirka Daahsoon
Next articleQaraxyo Is xigxiga oo kadhacay Muqdisho